အမ်မီနမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
Eminem သည် အမေရိကန် ရပ် အဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ ဂီတပုံစံကြောင့် နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Eminem ၏ ဒုတိယမြောက် အယ်လဘမ် Marshall Mathers LP (2000) သည် ထုတ်ဝေသည့် ပထမလမှာပင် ကော်ပီသန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့ရသည်။ မစ်ဆူရီပြည်နယ် စိန့်ဂျိုးဆက်မြို့တွင် သူ့အား မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည်ရင်းမှာ Marshall Bruce Mathers III ဖြစ်သည်။ Eminem သည် လူငယ်ဘဝတွင် လှောင်ပြောင်ခံရခြင်း နှင့် အခြားသရော်စော်ကားပြုခံရခြင်းများအား ရပ်စာသားများအဖြစ် ထည့်သွင်းသီဆိုခဲ့သည်။
Eminem performing in June 2009
(1972-10-17) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၁၉၇၂ (အသက် ၄၇)
Detroit, Michigan. United States
Kimberly Anne Scott (m. 1999–2001, 2006; divorced)
Game Recordings (former)
ကိုးတန်းသုံးခါကျပြီးနောက် ၁၉၈၉ တွင် Eminem သည် ကျောင်းမှထွက်ကာ စားသောက်ဆိုင်များတွင် အချက်အပြုတ်လုပ်သူအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရင်း အားလပ်သော အချိန်များတွင် ရပ်သီချင်းများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ အောင်မြင်မူ့မရခင်က Eminem သည် မီရှီဂန်ပြည်နယ်၊ ဒတ်ထရွိုက်မြို့မှ အသားကင်ဆိုင်တွင် လုပ်အားခ တစ်နာရီ (၅.၅ ဒေါ်လာ) နှုန်းဖြင့် စားဖိုဆောင်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
အန္တရာယ်များသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခက်ခဲစွာရှင်သန်ခဲ့ရသော Eminem သည် သူ၏ ရပ်ပါ နာမည်အား Slim Shady ဟုနာမည်ပေးကာ သူ၏ ဒေါသများအား သရော်သောပုံစံဆန်သည့် ရပ်စာသားများအဖြစ်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လော့အန်ဂျလိမြို့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရပ်အိုလံပစ်ပွဲတော်သို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ဒုတိယဆုရရှိခဲ့ပြီး တေးထုတ်လုပ်သူများက Eminem ကိုဂရုပြုမိလာကြသည်။ NWA ဝိုင်းတော်သားဟောင်း လူမည်း rapper နှင့် rap တေးထုတ်လုပ်သူ Dr.Dre မှ Eminem ကို သဘောကျသွားပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အယ်လဘမ် Slim Shady LP (1999) အားထုတ်ဝေပေးခဲ့သည်။ ထိုအယ်လဘမ်မှ သီချင်းစာသားများသည် ကာရံများဆန်းသစ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများ အသုံးပြုခြင်း၊ကိုးရိုးကားယား ပုံရိပ်များနှင့် မိမိကိုယ်ကို သရော်သော ပုံစံများကြောင့် ဟစ်ဟော့ ဂီတ ပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ဟန်တစ်ခုကို Eminem သည်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်သည် ချပ်ရေသုံးသန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရပြီး အကောင်းဆုံး rap album ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး rap solo performance အဖြစ် My Name IS သီချင်းဖြင့် ဂရမ်မီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
Eminem သည်ဒုတိယ အယ်လဘမ် Marshall Mathers LP တွင်ပိုမိုအောင်မြင်လာသော်လည်း ထိုအယ်လဘမ်အတွင်းရှိ သီချင်းစာသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းမလျာ များအား ပုတ်ခတ်သည့် ပုံစံပေါက်နေသောကြောင့် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများနှင့် မိန်းမလျာ အခွင့်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ ပြင်းထန်စွာ ဆန္ဒပြမူ့များနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Eminem သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွင် မိန်းမလျာတစ်ဦးဟု သူ့ကိုယ်သူ ဝန်ခံထားသော ပေါ့အဆိုတော် Elton John နှင့်အတူတူ Stan သီချင်းအား သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထိုဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွင် Eminem သည် ဂရမ်မီဆု သုံးဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
၂ Eminem ၏အယ်လဘမ်များ
Eminem ရဲ့ Billboard Hot 100 - Top Ten list
American Music Awards - 8 win (23 Nomi;)
Billboard Music Awards - 17 win (31 Nomi;)
Brit Awards -4win (7 Nomi;)
Grammy Awards - 15 win (43 Nomi;)
MTV Europe Music Awards - 15 win (29 Nomi;)
MTV Video Music Awards - 12 win (51 Nomi;)
People's Choice Awards -7win (10 Nomi;)
World Music Awards - 10 win (24 Nomi;)
Academy Awards (Oscars) - 1 win (1 Nomi;)
Guinness -5win
Eminem ရဲ့ အဲလ်ဘမ်ရှစ်ခုအနက် Diamond Single နှစ်ခု, RIAA Diamond Album နှစ်ခု စုစုပေါင်း Diamond လေးဆုရထားပါတယ်။
Eminem သည် သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းအား အခြေခံကာ 8mile ဆိုသော ရုပ်ရှင်ကားထဲတွင်လည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်သီချင်း Lose Yourself မှာ တေးဂီတဆုများ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၈-၁၂-၂၀၀၀ နေ့ထုတ် Time မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၏ အထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ် (၁၀)ဦး စာရင်းတွင် Eminem အား နံပါတ်(၁) အဖြစ်ရွေးချယ်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဆိုးဝါးသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခက်ခဲစွာရှင်သန်ခဲ့ရသော Eminem သည် သူ၏နာမည်အား Slim Shady ဟုနာမည်ပေးကာ သူ၏ဒေါသများအား သရော်သောပုံစံဆန်သည့် ရပ်စာသားများအဖြစ်ပြောင်းခဲ့သည်။ သူရဲ့ ပထမဆုံးအဲလ်ဘမ် Infinite ကို ၁၉၉၆ နိုဝင်ဘာလမှာဖြန့်ချိခဲ့ပေမယ့် သိမ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
NWA ဝိုင်းတော်သားဟောင်း လူမည်း rapper နှင့် rap တေးထုတ်လုပ်သူ Dr.Dre မှ Eminem ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယမြောက် အယ်လဘမ် Slim Shady LP (1999) အားထုတ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်မှ သီချင်းစာသားများမှာ ကာရံများဆန်းသစ်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသော စကားလုံးများ အသုံးပြုခြင်း၊ ကိုးရိုးကားယား ပုံရိပ်များနှင့် မိမိကိုယ်ကို သရော်သော ပုံစံများကြောင့် Hip Hop ဂီတပုံစံသစ်တစ်မျိုးအဖြစ် ကိုယ်ပိုင်ဟန်တစ်ခုကို Eminem သည်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအယ်လ်ဘမ်သည် ချပ်ရေသုံးသန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရပြီး အကောင်းဆုံး rap album ဆုနှင့် အကောင်းဆုံး rap solo performance အဖြစ် My Name IS သီချင်းဖြင့် ဂရမ်မီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
Eminem ၏ တတိယမြောက် အယ်လဘမ် Marshall Mathers LP (2000) သည် ထုတ်ဝေသည့် ပထမသုံးရက်မှာတင် ၂.၄ သန်း ကျော် ရောင်းချခဲ့ရသည်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ဟာ US Billboard 200 မှာလည်း No.1 ဖြစ်ခဲ့သည်။ "The Real Slim Shady", "Stan" တို့လို့သီချင်းတွေဟာလည်း လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ Marshall Mathers LP တွင်ပိုမိုအောင်မြင်လာခဲ့ပေမယ့် ဒီအယ်လ်ဘမ်ထဲက သီချင်းစာသားတွေက အမျိုးသမီးတွေနဲ့ gay တွေကို ပုတ်ခတ်သည့် ပုံစံပေါက်နေသောကြောင့် Eminemအမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများနှင့် မိန်းမလျာ အခွင့်ရေး တိုက်ပွဲဝင်သူများ၏ ပြင်းထန်စွာ ဆန္ဒပြမူ့များနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် Eminem သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ gay ဟုဝန်ခံထားသော အဆိုတော် Elton John နှင့်အတူတူ Stan သီချင်းအား သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ထိုဂရမ်မီဆုပေးပွဲတွင် Eminem သည် ဂရမ်မီဆု သုံးဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ လေးခုမြောက် The Eminem Show အဲလ်ဘမ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး အဲ့ဒိနှစ်မှာတင် ၇.၆ သန်းရောင်းရခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ထဲက တတိယမြောက်အဲလ်ဘမ်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးWithout Me, Superman, Sing for the Moment စတဲ့သီချင်းတွေဟာ လူကြိုက်များ ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ US Billboard 200 မှာ No.1 ရခဲ့ပါတယ်။
ငါးခုမြောက် Encore အဲလ်ဘမ်ကိုတော့ ၂၀၀၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး Just Lose It, Like Toy Soldiers, Ass Like That စတဲ့သီချင်းတွေ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ပထမနှစ်ပတ်မြောက် US မှာတင် ၁.၅ သန်းရောင်းရခဲ့ပါတယ်။ US Billboard 200 မှာလည်း No.1 ခိျတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ ခုနှစ်ခုမြောက်အဲလ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့ Recovery ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ထဲက Not Afraid, Love the Way You Lie, No Love, Space Bound သီချင်းတွေဟာ ပြည်ပမှာသာမက ပြည်တွင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။ US Billboard 200 မှာလည်း No.1 ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ The Marshall Mathers LP ပြီးတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှာ The Marshall Mathers LP2ဆိုပြီး Eminem ရဲ့ ရှစ်ခုမြောက်အဲလ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်ထဲမှာ နာမည်ကြီသီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Berzerk, Survival, Rap God, The Monster စတဲ့သီချင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအဲလ်ဘမ်က Billboard 200 မှာ No.1 ရခဲ့ပါတယ်။
↑ "Eminem's criminal record", BBC News, April 11, 2001. Retrieved July 8, 2008.
↑ Ankeny၊ Jason (2006)။ Eminem – Biography။ Allmusic။ January 30, 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "", Billboard
↑ "", Wikipedia
↑ Roberts, David (2006). British Hit Singles & Albums, 19th, London: Guinness World Records Limited, 137. ISBN 1-904994-10-5။
↑ Encarta online encyclopedia မှ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အမ်မီနမ်&oldid=487057" မှ ရယူရန်
၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၁:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။